Wasiirka Turhan Ayaa Yimid Khilaafka '' Warka Wanaagsan ee Ankara Sivas YHT | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia58 SivasWasiirka Turhan, Ankara Sivas YHT "Halt ma" siin doono warka wanaagsan
12 / 11 / 2018 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Wasiirka Turhan YHT ma siin doono wax dhibaato ah
Mashruuca Tareenka High-speed ee Ankara-Sivas, kaas oo sugaya dadka reer Caasimada leh ee xiisaha u leh, ayaa la soo dhameeyay. Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, wuxuu sheegay in mashruuca uu socdo oo uu siiyay warka wanaagsan.
WARBIXIN KU SAABSAN ANKARA SAFINTA SAFE
Qeybta mile ee 245 ee Yozgat-Sivas u dhexeeya xawaaraha sare ee tareenka, kaas oo loo adeegsan doono bilaabidda maxkamadeynta sanadka soo socda, ayaa lagu dhammeeyn doonaa waqtiga la cayimay.
Ankara-Sivas oo u dhaxaysa saacadaha 2 si loo yareeyo mashruuca Wasiirka Turhan uu ku dhawaaqay, Waddada Waddan ee loo qorsheeyay in lagu dhejiyo Ankara-Sivas YHT Line ayaa ku dhawaaqay in aysan wax dhicin.
Shaqada ayaa sii socota mashruuca Ankara-Sivas YHT, kaas oo la filayo in lagu yareeyo saboolnimada sida shaqada iyo socdaalka, gaar ahaan gaadiidka gobolka. Marka la dhammeeyo tareenka tareenka ee u dhexeeya Yozgat iyo Sivas gudaheeda mashruuca, tijaabooyinka tijaabada ahi waxay bilaaban doonaan sanadka soo socda.
Mashruuca Ankara-Sivas YHT, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan ayaa shalay ku dhawaaqay hadal uu soo saaray, wuxuu sheegay in mashruuca uu sii wadi doono in aysan joojin doonin.
Wasiirka Turhan, 2019 ee tijaabooyinka tijaabada ah ayaa la bilaabi doonaa si la mid ah horumarinta tiknoolajiyada macluumaadka, mashruucan wuxuu sheegay in isticmaalka hababka gaadiidka caqli-gal ah.
Isagoo sheegay inay dhiseen kun xNUMX kiiloomitir oo tareenka ah sanadkii la soo dhaafay ee 15, iyo in dhismaha xadka 983 kun ee 4 kiiloo mitir ee tareenka uu sii socon doono, ayuu yiri Turhan: Mashruuca tareenka xawaaraha dheereeya ee Ankara-Sivas, waxaan u dhownahay dhamaadka. ”
YHT ayaa yarayn doonta masaafada u dhexeysa labada magaalo illaa 2 Yozgat-Sivas u dhaxaysa kooxaha maalin kasta oo lagu dhawaaqay mitirka mitirka 750.
Khariidadda Ankara Sivas YHT
Wasiirka Turhan: "Waxaan ku dhow nahay dhamaadka Ankara-Sivas High Speed ​​Train Project"
Izmiris waxay sugaysaa injiilka Mashruuca ka gudubka Gacanka
Wasiirka Turhan YHT Jawaab